बडाललाई राणाको प्रश्न : के का लागि हस्ताक्षर गरेको सांसदले भन्ने कि तपाईंले ? - Kantipath.com
बडाललाई राणाको प्रश्न : के का लागि हस्ताक्षर गरेको सांसदले भन्ने कि तपाईंले ?
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। केही सांसदको नामै किटान गरेर उनले हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको बहसका क्रममा बताए। केही सांसदको हस्ताक्षरको शिलशिला नमिलेको र दलको आवद्धता पनि नखुलेको उनले बताए। तर महान्यायाधिवक्ता बडाललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सांसदको हस्ताक्षर दुरुपयोग बारे अरुले प्रश्न गर्न नमिल्ने बताए।
‘को सांसदले के का लागि हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो, सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग भन्ने विषयमा त उहाँहरु नै बोल्नु पर्ने होला नि अरुले भनिदिने विषय हो र?’, प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरे। केही सांसदले दुरुपयोगबारे बोलिसकेको बडालले बताए। किर्ते गरेर देउवाले दाबी पेश गरे पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको इज्जतका लागि राष्ट्रपतिले यो कुरा बाहिर नल्याएको बताए।
‘राष्ट्रपति ज्यूले त पूर्वप्रधानमन्त्री ज्यूहरुको इज्जत जोगाइदिनु भएको थियो। तर अदालत आएर उहाँहरुले नै उदांगो बनाउनु भयो’, बडालले भने, ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने बेलामा कस्ता कागजात पेश गरियो भन्ने हेर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले त्यही हेरेर निर्णय गर्नु भएको हो।’
निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको बहसमा समेत बडालले आपत्ति जनाए। ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको हत्या गर्नेसम्मका विषय उठे। फ्रान्स र बेलायतमा राजा काटिएका थिए भन्नु भयो। नेपालमा पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि होस् भन्ने उहाँहरुको भनाइ थियो’, बडालले भने।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रधानमन्त्रीको दाबेदारी प्रस्तुत गर्दा हस्ताक्षर किर्ते गरिएको विषयमा दर्ता गर्नुपर्ने बेला नै बोल्नुपर्ने होइन र? भनेर प्रश्न गरेका छन्। संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइअन्तर्गत सोमबारको बहसमा महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले प्रधानमन्त्रीको दाबेदारी प्रस्तुत गर्दा शेरबहादुर देउवाबाट हस्ताक्षर किर्ते भएको बताएका थिए।
महान्यायाधीवक्ताको बहसबारे टिप्पणी गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले आवेदन केरमेट गरिएको थियो भने दर्ता गर्ने बेला हेर्नुपर्ने होइन र? भनेर पनि प्रश्न गरे। सोमबारको बहसका क्रममा महान्यायाधीवक्ता बडालले देउवालाई लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘राष्ट्रपतिले दर्ता गरेर इज्जत जोगाइदिनु भएको हो। तर आफैं अदालत आएर इज्जतको जामा खोल्नु भयो। यो त किर्ते हो, किर्ते गर्ने कसरी प्रम हुन सक्छ ?’ महान्यायाधिवक्ता वडालको बहसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘दर्ता गर्ने समयमा हेर्नुपर्ने हेरिएन, दर्ता गर्न नपर्नेमा गरियो नि त! यो कुरा जसको प्रयोग भयो त्यो सांसदले भन्ने होला।’
Previous Previous post: बजेटमा दैलोका सरकार : कृषिमा आत्मनिर्भर, पर्यटनको प्रचार
Next Next post: ठूला सवारी मात्रै चल्न दिने सरकारको निर्णय अव्यवहारिक : मजदुर संगठन